सहयोगीले पठायो बोनस डिम्याट खातामै, नपाउनेले के गर्ने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » सहयोगीले पठायो बोनस डिम्याट खातामै, नपाउनेले के गर्ने ?
काठमाडौं - सहयोगी विकास बैंकले सेयरधनीको डिम्याट खातामा नै २०% बोनस सेयर जम्मा गरिदिएको छ । बैंकले मंसिर २८ गतेसम्म सेयर डिम्याट गराएका सेयरधनीको बोनस डिम्याट खातामा जम्मा गरिदिएको हो । तर, सेयर डिम्याट नगरेकाहरुले भने पहिला डिम्याट गरेपछि मात्र बोनस जम्मा गरिदिने बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, हालसम्म पनि डिम्याट खाता नखोलेका सेयरधनीले बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यापिटल, बबरमहल काठमाडौं तथा एनआइसी एसिया बैंकको कुनै पनि शाखा कार्यालयमा गएर आफ्नो सेयर डिम्याट गर्न सक्नेछन् । अनिमात्र बोनस सेयर खातामा जम्मा हुनेछ ।